Tinogona kuve new Apple Watch munaGunyana | Ndinobva mac
Tiri kuona mashoma mashoma makuhwa pamusoro peiyo inogona kunge iri nyowani iPhone 8, iPhone yegumi yegumi kana iPhone Pro yemwedzi uno waGunyana uye zvishoma kana hapana chiri kuoneka nezve zvingangoitika shanduko yeApple smartwatch, iyo apple watch.
Vamwe vezvenhau vanoyambira nezve mukana wekuti vakomana vanobva kuCupertino vachatitaridza Apple Watch nyowani, asi zvese zvakanangana nemhando dziri kuuya dze iPhone kuti hapana kana imwe nzvimbo yakasara yeguhwa reApple wachi.
Iyo Apple Watch yakatangwa muna Chikumi apfuura 2015 muSpain, uye kwete kare kare takagovana newe nhau dzinoreva kuti mukana wekuti Apple inowedzera zvikamu zveApple Watch Series 1 kune yakanyanya veteran modhi. kana yekugadzirisa kana kutomboita shanduko yakanangana neChitsauko 1 kana dambudziko risina mhinduro, asi Apple ingadai ichigadzirira kuratidzwa kweiyo Apple Watch modhi nyowani?
Nezve dhizaini yeApple wachi, isu hatina zvichemo, kunyangwe chiri chokwadi kuti havazi vese vanogona kuzvifarira uye nevamwe, iyo kambani inowanzoita kuti zvigadzirwa zvigadziriswe, kunyangwe hazvo panguva yekuparura mazhinji emakomendi nezve dhizaini zvisina kunaka, ipapo zviyero zvekutengesa zviri kutarisira kuti "zvaive zvisina kushata" dhizaini. Asi ichokwadi kuti mushure memakore matatu achasangana munaGunyana dhizaini iyi inogona kuvandudzwa uye zvechokwadi mamwe makuhwa mashoma anofanotaura kudaro.
Iko kutengesa kweiyo wachi hakuna kumbobvira kwaziviswa neApple mumakota emakota uye zviri pachena kuti Apple Watch haisi yekuti dzinotengeswa kunge hotcakes asi ichokwadi kuti Apple ndeimwe yevashoma vakakwanisa kuchengeta mhando neiyi mawrist accessories. , zvimwe kana iwe ukatarisa kune mamwe makambani ayo zvakare ane aya akangwara mawatch mumabhuku avo. Kana izvozvi vachizvivandudza nekugadzirisa patsva uye nekumwe shanduko mune zvemukati zvikamu, zvinogamuchirwa zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tinogona kuve new Apple Watch munaGunyana
Vhidhiyo nyowani yeApple Park kunyangwe paine nhau nezve kudzora kwendege munzvimbo iyi